Ogaden News Agency (ONA) – La-taliyaaysha Cabdi iley oo go’aansaday inay khaarijiyaan qaar badan oo ka mid ah Hawaarinta
La-taliyaaysha Cabdi iley oo go’aansaday inay khaarijiyaan qaar badan oo ka mid ah Hawaarinta
Waxaa bilihii la soo dhaafay kala yaacayay maxaysatadii uu Cabdi Iley u abaaulay inuu ku shaqaysto. Arimahaas oon xog fiican idiinkaga hayno ayaan soo galin doonaa inta aan ugu talagalnay waqtigan.
Waxaa kaloo jirta in ka badan 10 jawaasiistii hawaarinta in xabsiga lagu guray kadib markii laga dareemey inay baxsanayaan siday horayba ugu goosteen koox kamid ah hawaarinta ka amar qaadata damiir laawe ina Ileey.
Kooxdan xabsiga loo taxaabay oo ka howlgali jirtay xafiiska Marajaa (Sirdoonka) oo hoos taga Liyu booliska ayay shaqadoodu ahayd inay ka howl galaan wadamada dariska la ah Ogadenya sida maamulada Hargaysa iyo Puntland iyo Jabuuti, iyo magaloyinka waweyn ee Itoobiya sida Adisabab iyo magaalada Diridhaba, mararka qaarna loo diri jiray goobaha dagaalka. Waxay sidoo kale maraamari jireen maxaabiista jeelasha kujira.
Wararka kalee dagdag ah ee muujinaya masiibada haysata Hawaarintii oo Ilaahay uu ku saladay kuwii abaaulayay ayaa sheegaya inuu maalin dhaweeyd u anbabaxay degmada Birqod koox uu hogaaminayo dambiile Cabdiraxmaan labagole oo ku magacaaban abaanduulka liyuu policeka. Waxaana lasheegayaa in uu halkaas u tagay in uu soo khaarajiyo qaar kamid ah koox liyuu police ah oo halkaas kuxidh xidhan kanamdi ah wiilasha Hawaarinta ee dagaanada degmada Araarso oo koox kamid ihi ay ka goosteen maalma dhaweyd. Hadaba wararka ka imanaya waxay heegayaan in uu ina labagole halkaas u tagay in uu kurka kazoo guro cidii kooxdaas xidh xidhan kamid ah ee loo aaneeynayo inay kooxdan goosatay xidhiidh la leeyihiin ama lug ku leeyihiin.
Waxaad filataan warar faahfaahsan oo ku saabsan jahawareerka ka taagan kooxda Jigjiga oo Cabdi iley uu ku dacweeyay inay wasiiradiisa xidhiidh la leeyihiin ONLF oo aanu aamnisnayn. Xogtaa oon ka helnay ilo rasmi ah ayaan soo galin doonaa qaybaha daahrogga aan ugu talagalnay waqtigan.